Maka: isikhombimsebenzisi esibonakalayo somsebenzisi | Martech Zone
Umaka: isikhombikubona esisebenziseka kalula
Ngebhizinisi elisha, nonke nikulungele ukungena emakethe kodwa kukhona into eyodwa engekho, iwebhusayithi. Ibhizinisi lingaqhakambisa uphawu lwalo futhi libonise ngokushesha amanani alo kumakhasimende ngosizo lwewebhusayithi ekhangayo. Ukuba newebhusayithi enhle, ekhangayo kuyinto edingekayo kulezi zinsuku. Kepha yiziphi izinketho zokwakha iwebhusayithi? Uma ungusomabhizinisi noma ufuna ukwakha uhlelo lwakho lokusebenza okokuqala